कोरियोग्राफर रेमो डिसुजालाई पर्यो शोक, परिवारका यि सदस्य घरमा मृ त फेला परे – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /समाचार/कोरियोग्राफर रेमो डिसुजालाई पर्यो शोक, परिवारका यि सदस्य घरमा मृ त फेला परे
एजेन्सी । कोरियोग्राफर रेमो डिसुजाको परिवारबाट दुखद खबर बाहिर आएको छ । रेमो डिसुजाको सालो मृ त फेला परेका छन् । रेमोकी श्रीमती लिजेल डिसुजाका भाइ जेसन वाटकिन्सको निधन भएको छ । उनी आफ्नै घरमा मृ त फेला परेका थिए । तर, रेमो र उनकी श्रीमती लिजेलले उनको मृत्युको बारेमा अहिलेसम्म कुनै बयान जारी गरेका छैनन् । भारतीय मिडियाका अनुसार रेमोका साला जेसन वाटकिन्स मुम्बईको आफ्नो अपार्टमेन्टमा मृ त फेला परेका थिए । तर, मृत्युको कारण भने अझै खुल्न सकेको छैन । प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार जेसन वाटकिन्सले आफै मृत्युको निर्णय लिएको अनुमान गरिएको छ ।
भारतीय प्रहरीलाई उल्लेख गर्दै अमर उजालाले लेखेको छ स्थानियले पुलिसलाई सूचित गरे र वाटकिन्सलाई नजिकैको अस्पतालमा लगियो जहाँ उनलाई मृ त घोषित गरियो। प्रारम्भिक जानकारीको आधारमा, ओशिवारा पुलिसले यस मामिलामा दुर्घटना मृत्यु भएको भन्दै निवेदन दर्ता गरेको छ किनकि केहि पनि शंकास्पद भेटिएको छैन, ।
फिल्म निर्माता रेमो डिसुजाका साला जेसन वाटकिन्स बिहीबार मुम्बईको मिल्त नगरस्थित उनको घरमा मृत फेला परेका थिए । यो जानकारी दिँदै एक प्रहरी अधिकारीले भने, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानका अनुसार वाटकिन्स घरमा एक्लै थिए । उनका आमाबुवा औषधि किन्न बाहिर गएका थिए र फर्कँदा उनीहरूले छतमा झु ण्डि एको अवस्थामा फेला पारे। ४२ वर्षीय वाटकिन्स केही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याबाट ग्र सि त थिए जसका कारण उनले यो कदम चालेको हुनसक्छ, तर घटनास्थलबाट कुनै नोट फेला परेको छैन।
यस विषयमा रेमोको तर्फबाट अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन । लिजेलले पनि यसबारे सीधै कुनै जानकारी दिएकी छैनन् तर उनले आफ्नो भाइको केही तस्विर शेयर गर्दै निकै भावुक कुरा लेखेकी छिन् । लिजेलले आफ्नो भाइ जेसन वाटकिन्सको तस्बिर सेयर गर्दै लेखेकी छिन्, ूकिन ? तिमीले मलाई यो कसरी गर्न सक्छौ ? (म) तिमीलाई कहिल्यै माफ गर्दिन।ू यसपछि उनले आफ्नो बाल्यकालको अर्को तस्बिर सेयर गर्दै लेखिन्, ‘किन’। लिजेलले आमासँग अटोमा बसेको जेसनको तस्बिर सेयर गर्दै माफी मागेकी लेखिन् । (मलाई) माफ गर्नुहोस् आमा, मैले तपाईलाई असफल गरें।
पोखरामा आमाले भर्खरै जन्मेको सन्तानलाई कपडामा बेरेर दराजमा राखेपछि…
दिल्लीबाट धुलोसहितको वायु नेपाल आयो, पूर्वमा इलाम र रौतहटसम्म तुवाँलो